တီတင့် (စက်မှု တက္ကသိုလ်): တရားထိုင် တရားမှတ် လုပ်သင့်ပါတယ်
ကျွန်မ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ပုတီးစိတ်တလှည့် တရားထိုင်တလှည့် အချိန်ရရင်ရသလို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် တစိုက်မတ်မတ် တရားထိုင်ဖြစ်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇-နှစ်လောက်ခန့်က စထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျရှိမှုနဲ့ နေ့စဉ်ပုံမှန် အချိန်သတ်မှတ်ပြီး တရားထိုင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဟာ ရွှေမြင့်မိုရ် ဝိပဿနာတရားဓမ္မရိပ်သာကျောင်းမှာ (၁၀)ရက် တရားစခန်း ၀င်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလက စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ကျွန်မကို လမ်းမှန်၊လမ်းဖြောင့် သွားနိုင်ဘို့ရာ လမ်းကောင်းညွှန်ပြခဲ့သူ အဒေါ်တွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ စမ်းတဝါးဝါး မှုန်ဝါးဝါး မသေချာ မရေရာတဲ့ လမ်းကနေ ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အလင်းရောင်ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်တဲ့လမ်းကို ကျေနပ်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြေ။ ဟုတ်ကဲ့ ( ကိုယ့်ဘုရား ၊ကိုယ့်ကိုးကွယ်မှုကိုကိုယ့်
Serotonin အာနိသင်နဲ့ပြောင်းပြန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုးကျိုးအများစုရစေတတ်တဲ့Cortisol ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတမျိုးရဲ့ သွေးထဲမှာ လှည့်ပတ်နှုန်း ဟာ လဲတရားထိုင် တရားမှတ်ခြင်းဖြင့် ၅၀ % လျော့ကျစေတ်ာလို့Rutgers Universityမှ ဆရာဝန်များကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Cortisol များနေခြင်းဟာ အကြမ်းအားဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ စေခြင်း ၊ စိန်ကျဝေဓနာခံစားရခြင်း ၊ သွေးတိုးခြင်း ၊ အိပ်မပျော်ခြင်းနဲ့ ကြွက်သားအရိုးအဆစ်များ ရောင်ရမ်းနာကျင်စေခြင်းများကို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိစေပြီး နဂိုရှိပြီးသား အလားတူ ဝေဒနာ များကိုလည်း ပိုဆိုးစေပါတယ်။ အဲဒီ့ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့Cortisol. ဟာ တရားထိုင်၊တရားမှတ်ရင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်သိသိသာသာကျသွားစေတယ်လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ University of California Davis မှ သုတေသနပညာရှင်တွေက ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
တရားထိုင် ၊ တရားမှတ်ခြင်းဟာ “အသက်ရှည်ဆေး”တမျိုးပါဆိုတဲ့ ခေါတ်သစ် လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တခုလဲ ရှိပါသေးတယ်။ DHEA ဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ဟော်မုန်းတမျိုးဟာ အသက်ကြီးရင်လျော့ကျလာတတ်ပြီး အဲ့ဒီဟော်မုန်းနဲနေသူများ ဟာ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သေဆုံး မှုတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှု ရှိတတ်ပါတယ်။ လူကြီးရောဂါများကို တိုက်ဖျက်ကုသနေတဲ့အမေရိကန်ဆရာဝန်များဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Vincent Giampapa ရဲ့ သုသေသနတခုမှာ တရားထိုင် ၊ တရားမှတ် ပုံမှန်လုပ်နေသူဟာ အဲ့ဒီ DHEA ဟော်မုန်း ၄၃ ၇၇%ပိုများတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
“တရားထိုင်လေ့ရှိတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရတာ အမြဲအေးချမ်းနေတာပါပဲ ” ဆိုတဲ့စကားသံ မှတ်ချက်သံတွေ သင် မကြာခဏ ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ် ။ ဆေးပညာ ရှုဒေါင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း ၊ စိတ်ပူပန်မှုများခြင်း ၊ စိတ်အစဉ်ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းစသည်တို့ မဖြစ်ပဲ အမြဲအေးချမ်းတည်ငြိမ်နေခြင်းဟာဦးနှောက်နဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကြီးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပုံမှန်လုပ်သည်ထက် ပိုမလုပ်အောင် ထိန်ချုပ်တားဆီးထားတဲ့ GABA လို့်ခေါ်တဲ့ အာရုံကြော ဓာတုအရည်တခုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အစွမ်းထက်တဲ့ GABA level ဟာတရားထိုင်တရားမှတ်ခြင်းနည်းနဲ့ မိနစ် ၆၀ လောက်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်ကိုပဲ ၂၇%နကိလာတယ်လို့Boston University မှစိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်များက ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီ့ ကိန်းဂဏန်းဟာ ရိုးရိုး ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာထက် ပိုအကျိုးများစေတယ်လို့လဲပါရှိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သမထ ကျင့်ကြသူများဟာ ဝိတက် ၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ ၊ သုခ ၊ ဧကက္ကတ၊ ဥပစာရစသည့် သမာဓိအဆင့်ဆင့်အနက် ပီတိ အဆင့်ရောက်လျှင် အဲဒီ့Endorphin ထွက်ပြီး ၊ဝိပသနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်သူများ အတွက်တော့ ခဏိကသမာဓိ ရချိန်မှာ Endorphin ထွက်ကာနာကျင်မှုဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကောင်းများ ရရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံမှုတရပ်ကတော့၁၉၉၅ ခုနှစ်ထုတ် Biology PsychologicalJournal မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတခုအရ မာရသွန် အပြေးသမား ၁၁ ဦးနဲ့ အလေ့အကျင့်ရပြီးသား တရားထိုင်သူ ၁၂ ဦးတို့ကို စမ်းသပ်ကြည့်ရာ အုပ်စု ၂ စုလုံး Endorphin level တွေတက်နေပြီး တရားထိ်ုင်တဲ့ အုပ်စုက လူများဟာ ပိုမိုတက်နေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့လောက်ရောဂါတွေကာကွယ်စေတဲ့ Melatonin ဟာ တရားထိုင် တရားမှတ်ခြင်းနဲ့ပိုပိုလျှံလျှံထွက်စေတယ်ဆိုတာ ကို Rutgers Universty. မှ သုသေသနပညာရှင်များဟာ တရားထိုင်သူများကို စမ်းသပ် သုသေသနပြုကြည့်ရာ တရားထိုင်သူများရဲ့. ၉၈% မှာ သာမန်လူများထက်၃၀၀%တက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။